Disneyland Paris | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Paris, Ihe ị ga-ahụ
Disneyland Ọ bụ ụlọ ọrụ mba dị iche iche ma wuo "alaka" n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa, yabụ na ndị mmadụ anaghị agagharị na United States mgbe niile iji nwee ọmarịcha ogige ntụrụndụ.
Ee, ee, ogige ntụrụndụ dị n'America bụ nke kachasị mma mana ịnwe ihe atụ anyị nwere ike, dịka ọmụmaatụ, nleta Disneyland Paris.
2 Gị Disneyland Paris
O yiri ka echiche nke ogige ntụrụndụ n’èzí United States malitere ịkpụgharị na 70 mgbe ihe ịga nke ọma nke ogige ndị dị n’ebe a n’oge ahụ. Agbanyeghị, ụdị nke European ga-abata na mbido 90. Afọ iri tupu mgbe ahụ ọ bụ oge Disneyland Tokyo iji tụlee ebe mba Europe nke European mbipụta nwere ike wuru nke ọma.
Site na mgbe ahụ enwere ụzọ abụọ: Spain na France. Mba abụọ ahụ bụ ndị njem nleta, nwee ihu igwe dị mma ma ha dị mma maka mmekọ na Europe ndị ọzọ. Ọ na-aga n'ekwughị nke ahụ France meriri aka mgba mgba n'agbanyeghị na ọnọdụ ahụ abụghị na esemokwu: Ọchịchị nke ọdịbendị? America nke Europe? na ụdị ihe ahụ.
Kedu ihe ọ bụla, Euro Disney Resort mechara mepee ụzọ ya na 1992. Oge mbụ siri ike na nleta eruteghị ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ ahụ tụrụ anya, mana obere obere ọnọdụ malitere ịgbanwe, dị ka aha ogige ahụ, ọ bụkwa otu ahụ ka anyị si rue taa. Disney Land Paris Ọ baghịdị ihe ụmụnne ya nwoke tọrọ, ma ọ ka dị nso na Disney ka anyị nwere ike ịnweta na-enweghị ijide ụgbọ elu.
Gị Disneyland Paris
N'ime e nwere ogige ntụrụndụ dị iche iche: ọ bụ Ogige Disneyland, Walt Disney Studios Park na Disney Village. N'ime e nwekwara mgbagwoju nke asaa Disney hotels na ụlọ nkwari akụ isii ndị ọzọ ejikọtara mana ụlọ ọrụ ahụ anaghị achịkwa ya.
Ogige dị na Mame la Vallèe - Chessy na iji nweta ebe a site na njem ụgbọ njem ị nwere ike iji ụgbọ oloko na-ejikọ na netwọk RER na TGV dị elu. Yabụ, ịnwere ike ị nweta ebe ahụ site na France mana site na London.
Ya mere, ka na-amalite na ihe anyị nwere ike ime ebe a. Gbanye Disney Land Paris enwere otutu ihe omuma di egwu: Mickey's Philhar Ime Anwansi, Ọ bụ obere ụwa, Adventure Isle, Alicia's Curious Labyrinth, Autopia, Nnukwu Thgbè Eluigwe, Blanche-Neige et les Sept Nains, Little Circus, Discovery Arcade, Dumbo, Frontierland Playaraound, Indiana Jones na Templelọ Nsọ nke Nsogbu, Insonlọ Robinson, Dragọn nke Dragọn, Ihi ụra Mara Mma, Ihi ụra Ezigbo ụlọ, Lancelot's Carousel, the Ihe omimi nke Nautilus, Njem nke Pinocchio, Orbitron, Pirates nke Caribbean na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ihe ọ bụla na-adọrọ gị ka gị na ezinụlọ gị nọrịa, n'agbanyeghị na ụfọdụ ọ dị mkpa inwe ogogogo kachasị elu. Dịka ọmụmaatụ, maka abụọ n'ime ebe nkiri atọ Star Wars. Na banyere Disneyland Paris n'ihi na Walt Disney Studios Park nwere ebe nlegharị anya nke ya metụtara nnukwu fim anyị niile maara. E nwere mpaghara mmepụta ise.
N'etiti ndị a ebe nkiri anyị nwere Crush's Coaster, Disney Studio 1, Les Tapis Volants, Ratatouille, Slinky Dog Zigzag Spin, Twilight Zone Tower nke ụjọ, Toy Soldiers parachute na Studio Tram Tour. Ma ugbu a, ka anyị gbakwunye ya a na-ewu ihe nkiri metụtara ndị Advengers.
N'ezie, n'ime ogige ahụ ị nwere ike ịnụ ụtọ ya ihe omume na ngagharịNwere ike izute Mickey, ụmụ eze nwanyị Disney, Winnie, Pluto ma ọ bụ Ọchịchịrị Vather, dịka ọmụmaatụ. A na-eme ndokwa "nzukọ" a kwa ụbọchị n'oge dị iche iche, yabụ ndụmọdụ m bụ ịga na webụsaịtị nke ogige ahụ, n'asụsụ Spanish, wee leba anya na ndị kachasị masị gị.
Kedu oge eleta? Ma ebe ntụrụndụ abụọ mepere site n’elekere iri nke ụtụtụ ruo nke isii nke ụtụtụ, ma mgbe ị na-alọghachi, ọ dị mfe ịlele tupu ị gaa na weebụsaịtị n'ihi na n'ime ha ụfọdụ ebe nkiri nwere usoro oge ndị ọzọ.
Kedu ụdị tiketi e nwere? Enwere tiketi ụbọchị, tiketi tiketi ọtụtụ ụbọchị na mbufe ma na-agafe. Iji maa atụ, ntinye ụbọchị taa na-efu euro 87 maka okenye okenye karịrị afọ 12 na 80 maka ụmụaka nọ n’agbata afọ atọ na iri na otu. Tiketi ahụ dị irè maka otu afọ maka ụbọchị ọ bụla. Mgbe ahụ, dabere na kalenda nke egosiri na ịntanetị, ị nwere ụdị tiketi ndị ọzọ, nke akọwapụtara na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ, ntakịrị dị ọnụ ala. Enwekwara ọhụụ ọhụrụ kwa afọ.
N'ezie, tiketi nke dị irè maka ụbọchị ole na ole dabara adaba n'ọnọdụ akụ na ụba. Ofdị tiketi a gụnyere ịnweta ogige abụọ Disney ma enwere ụbọchị 2, 3 na 4 na ọnụahịa nke 84, 50, 70, 33 na 62,25 euro maka okenye. N'ikpeazụ enwere tiketi na mbufe na bọs na-apụ site na ọdụ Gard du Nord, Opera ma ọ bụ Châtelet maka ogige ụbọchị / 1 na ogige ụbọchị 1/2 maka euro 184 na euro 224 (ndị okenye abụọ).
Ọzọkwa n'ime ụdị tiketi a ị nwere nhọrọ nke 1 Day / 1 Park na-apụ n'ụlọ elu Eiffel ma ọ bụ 1 Day / 2 Parks na-apụ site na saịtị ahụ maka euro 184 na 224 n'otu n'otu. Echiche ị ga-aga ileta ogige Disney bụ ịga nọrọ ụbọchị ahụ yabụ na ọ ga-adị mma ma ị laruo ma nọrọ n’ụbọchị ahụ dum na-ekpori ndụ. Maka nke ahụ n’otu ogige ahụ enwere ọtụtụ ụlọ nri, nke dị na Disney Village, nke gụnyekwara cinemas IMAX na ụlọ ahịa iji wepu ụdị ihe ncheta niile.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-achọ ka ihe niile kenyere mgbe ahụ mmemme nri Disneyland Paris Ha dịịrị gị mma n'ihi na ị nwere ike ịhazi nri tupu oge eruo ma dịkwa jụụ ma nwee mmefu ego tupu oge eruo. Enwere atụmatụ nri dị iche iche yana ụfọdụ atụmatụ gụnyere iri ihe na mkpụrụedemede Disney. Iji nwee obi ụtọ na mmemme ndị a, ị ga-eme ndoputa tupu (họrọ n'etiti ọkara osisi, bọọdụ zuru ezu, nri nri, wdg), ịnata Kupọns ahụ mgbe ị debanyere aha na họtel na voila, ị nwere ebe 20 ịhọrọ ebe ị ga-eri.
Ahịa? I nwere a ọkara plan plan (nri ụtụtụ, otu nri kwa onye kwa akwụkwọ) site na 39 euro kwa okenye o zuru osisi site na 59 euro ụkpụrụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ planụ ise. Restaurantslọ oriri na ọ moreụ youụ ndị ị gbakwunye na ndepụta ahụ, ị ​​ga-akwụkwu ụgwọ karịa euro 120 maka mbadamba zuru ezu.
Rụchaa, ma ọ bụrụ na i nwere mmasị n'ezie na ịga Disneyland Paris ị nwere ike iri uru nke nkeertas: Ọ bụrụ n ’ide akwụkwọ tupu Machị 4, 2020 wee rute n’abalị abụọ nke Eprel rue Nọvemba 2, ị ga-enwe ọ discountụ 1% + otu ọkara akwụghị ụgwọ. Maka oge oyi enwere ego 25% na ọnụnọ ma ọ bụrụ na ịdee akwụkwọ tupu Machị 30 ị nwere tiketi ndị okenye na ọnụahịa nwatakịrị. Iji uru!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Paris » Disney Land Paris